Ny dimy dingana ny fanavaozan - toetra tsara kokoa ny fiainana any am-piasana - Ny mpahay lalàna ao Frantsa online!
Ny dimy dingana ny fanavaozan - toetra tsara kokoa ny fiainana any am-piasana
Ny sasany zava-nitranga (Drafitra nomaniny ho Solon'izay ny Asa, ny fiombonana, ny fandaminana ny fiovana, manan-danja, sns) dia za-draharaha amin'ny mpiasa ao amin'ny fomba feno herisetra. Ny manam-pahaizana manokana ny Quali ara-Tsosialy miaraka amin'ny fikambanana nandritra ny fanavaozan-drafitra ny fanaovana misy ny zava-niainany sy ny fampiasana ny fizotry ny fanombanana sy fanadihadiana mifototra amin'ny fanadihadiana natao vao haingana sy ara-tsiansa, boky ao psikolojia, ny fitantanana ary fandaminana ny fiovanaJereo ny fomba fiasa ny Quali Sosialy mba hisorohana ny ara-tsaina ny loza mety hitranga nandritra ny fanavaozan-drafitra, Na dia toe-javatra miseho tsirairay dia tsy manam-paharoa, dia azo atao mba hiteraka ny modely ao amin'ny dingana dimy izay orinasa dia handeha eo amin'ny fandaminana indray. Modely io dia mamela ny iray mba hanazava ny fifandraisana misy eo amin'ny tsirairay sy ny vondrona ao amin'ny raharaham-barotra sy ny fomba mba hifanaraka toy ny fiovana mitranga. Ny dingana ny fifohazana dia ny fanentanana ny imbalance eo amin'ny tontolo iainana sy ny fikambanana ary ny mila manao fiovana. Ny orinasa ihany koa ny fanomanana ny fiovana sy ny fizotry ny faharavan'ny ho avy. Ny fanambarana (anatiny sy ivelany) dia ny hanombohana ny dingana fanovana. Izany dia azo raisina amin'ny mpiasa toy ny tsy ampoizina sy ny herisetra, ary hiteraka fihetseham-po mahery vaika.
Mandritra izany fotoana izany, isika dia mahita toy izany koa ny dingana amin'ny misaona (dingana).
Miankina amin'ny ambaratongam-adhesion, ny mpiasa, dia afaka mahita ny fanoherana ny fiovana. Izany no antony ny fanavaozan-drafitra ny fifandraisana no tena antony Ny simba dingana ny dingana izay ny fikambanana dia rava mba hanaovana ny endrika vaovao. Ny taloha ny toerana dia levona sy ny vaovao dia tsy mbola hita maso Ny olona dia mety hahatsapa ho very sy miseho ny soritr'aretina ny tebiteby sy ny adin-tsaina. Io dingana io izay faran'ny haingana araka ny taloha ny fikambanana dia tsy misy intsony ao an-toerana. Ny fanorenana indray ny dingana ny dingana izay misy ny fiovana dia vita Ny mpiasa mandray tsikelikely toerana ao amin'ny fikambanana vaovao raha tsy misy ny fifehezana ny ins sy avoaka ny toerana.
Miankina amin'ny fomba izay ny fanovàna atao ary araka ny hevitry ny olona, dia jereo ny roa mombamomba ny mpiasa: ireo izay manana fahatokian-tena ny amin'ny hoavy jereo ny fikambanana soritry ny tebiteby sy ny adin-tsaina hanjavona ireo izay tsy manana fahatokian-tena ny amin'ny hoavy fikambanana jereo miseho ny soritr'aretina ny fahakiviana (very ny heviny, ny tanjona sy ny tombontsoa eo amin'ny asa).
Ny dingana fampidirana hita, noho izany, fa amin'ny fandaminana vaovao ao an-toerana. Izany perpetuates ny fiovana, ary consolidates ny hetsika natao tany aloha ny dingana. Isika mahita ny mombamomba ny mpiasa mampitombo: ny fisehoan 'ny tebiteby sy ny adin-tsaina hanjavona ao amin'ny olona ny fananana fahatokiana ny fandaminana vaovao, ary ny fisehoan' ny fahaketrahana, hanamafisana teo anivon ny mpiasa izay tsy manana izany fahatokiana izany. Ny fanavaozan-drafitra dia ela dingana fa dia mamporisika ny firongatry ny ara-tsaina ny loza mety hitranga. Mba ho azo antoka ny fiarovana sy ny fiarovana ny ara-batana sy ara-tsaina ara-pahasalamana ny mpiasa, dia ilaina ny mampihatra ny fitaovana ny fisorohana ny ara-tsaina ny loza mety hitranga nanolo-tena. Ny sasany orinasa toy ny FNAC na Ny Finday Trano efa nahita ny tetikasa fandaminana indray nandao noho ny tsy fiheverana ny olombelona lafin-javatra ao amin'ny reorganisation. Atsaharo ny FNAC desambra (Fitsarana Ambony Paris) dia nametraka fa ny orinasa lehibe mila mijery ny hita any amin'ny fiatombohan'ny rano eo amin'ny olombelona ny fiantraikan'ny drafitra reorganizations sy mandray andraikitra mba hanalefahana ny loza ateraky ny ambany ny tetikasa ho amin'ny fandaminana indray nilaozan'ny"mba Hisorohana ny psycho-tsosialy ny loza mety hitranga nandritra ny fandaminana indray, Ny"maso ara-pahasalamana", ny zava-baovao fa adapts ho amin'ny rafitra ara-pahasalamana sy ny fomba fiainana tsy evolution".
Ny antso ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ara-panjakana
An chúirt eadráin le haghaidh spóirt